နှင်းဝေတဲ့ဆောင်းမှာ နှင်းရုပ်ထုတွေလုပ်ကြမယ် - JAPO Japanese News
ဂါ 14 Jan 2020, 13:50 ညနေ
ချမ်းအေးလွန်းတဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆောင်း . . .နေရာဒေသအလိုက်မတူကွဲပြားတာတွေရှိပေမယ့် ဆောင်းရာသီလို့ဆိုလိုက်ရင်“နှင်း”ကိုပြေးမြင်ကြမှာပါ။ ကလေးဘဝတုန်းကနှင်းကျရင်ပျော်ခဲ့ပေမယ့် အခုတာ့နှင်းတွေကျနေလည်းအလုပ်မသွားလို့မဖြစ်တဲ့လူကြီးတွေအတွက်ကတော့“နှင်း”ဆိုတာ စိတ်ပျက်စေတဲ့အရာကလွဲပြီးမရှိပါဘူး။
အေးကလည်းအေး၊ နှင်းတွေကဆက်တိုက်ကျလို့ အရည်ပျော်ပြီးခဲကုန်၊ရေတွေခဲကုန်လို့ချောနေတဲ့လမ်းတွေကြောင့်အန္တရာယ်ကများ၊ အဲဒီအပြင်ကိုရထားကလည်းနောက်ကျဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာကြီးပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုနှင်းရုပ်လူသား (SnowMan) ကိုတွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ဆီးနှင်းတွေကိုသဘောကျမိသွားမှာပါ။
ဆောင်းတွင်းတစ်ခုလုံး ကြိုးစားပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ SnowMan တွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
千と千尋の神隠し (Spirited Away) Animation ထဲက カオナシ (Kaonashi)
မနက်အစောကြီးပေါ့၊ အမေအဲဒါကိုမြင်ပြီးထအော်တာ သူပါလန့်နိုးသွားတယ်တဲ့။ အိမ်ထဲကိုချောင်းကြည့်နေတာနော် ကြောက်စရာကြီး။ (ဘာသာပြန်နေတဲ့ကိုယ့်အတွက်ကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲ Spirited Away အရမ်းကြိုက်လို့လေ။ ဟီး)
အသစ်တစ်ဖန် ပီကာကျူး Pikachu ?
သူသိရင်တော့စိတ်ဆိုးတော့မှာပဲ. . .
Hachiko လေးရဲ့ ပုံတူကိုယ်ပွား!
Shibuyaဘူတာရှေ့ကနာမည်ကြီးတဲ့ Hachikoကြေးရုပ်ထုရဲ့ ပုံတူနှင်းရုပ်လေးပေါ့။
Zombieတွေလား ? ဆီးနှင်းတွေကနေ မွန်းစတားတွေဖြစ်ကုန်တဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခု. . .
အနုပညာဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ။ ညစ်ပေနေတဲ့နှင်းတွေကိုသုံးပြီး ကင်ထားတဲ့ မိုချိမုန့်လေးလိုမျိုးပုံဖော်ထားတာလက်ရာမြောက်ချက်ပဲနော်။
ကဲ. . .ဒါဆိုရင်တော့ မြူနှင်းတွေကျကာချမ်းအေးလှတဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆောင်းရာသီမှာ. . .ပျော်စရာတစ်ခုခုတော့ဖန်တီးလို့ရသွားပြီထင်တယ်နော်။
ဂျပန်မှာ Bubble Tea ပြီးရင် ဘာခေတ်စားလာတာလဲ ?